CPA vs MBA: Which is Better For Your Career & ụgwọ? [2018 update]
CPA Review Ọmụmụ
CPA Exam Chọrọ
CPA vs MBA: Nke Otu bụ Better N'ihi na gị Ọrụ & ụgwọ?
23 Aug CPA vs MBA: Nke Otu bụ Better N'ihi na gị Ọrụ & ụgwọ?
Posted at 22:50h na Accounting Careers, Main Blogroll site Bryce Welker, CPA 0 Comments
Updated:October 17, 2018
College ụmụ akwụkwọ na-ahụ onwe ha mgbagwoju anya mgbe ị na-ekpebi n'etiti aga maka ha CPA ikike ma ọ bụ ịkpata ihe MBA ogo. The isi na-eweta ezi oke bụ site na nwale nke gị ọrụ mgbaru ọsọ ma na gị onye na-amasị. Kama na-achọ ka ndị ọzọ n'ihi na ndụmọdụ, ọ bụ mma na ị na-oge na-eche banyere ọdịnihu gị atụmatụ. Iji nyere gị aka ime mkpebi, ka anya na ihe ndị bụ isi nke onye ọ bụla mere na i nwere ike zuru ike na naanị na-eche banyere ọdịnihu gị ohere.
Gịnị bụ a CPA?
Gịnị bụ a MBA?
CPA vs MBA: ọrụ Ụzọ
CPA vs MBA: ụgwọ ọnwa
CPA vs MBA: Asambodo Akwụ ụgwọ
CPA vs MBA: Oge chọrọ
Ya mere, Nke Otu kaara unu mma?
A Certified Public ego (CPA) na-a ego nzere ntozu ọdịda site na American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Nke a asambodo a ghọtara dị ka a akara nke oké mmeta na ego ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ibu a CPA, ị ga-agabiga ihe udomo oro na a mụụrụ site na AICPA. The CPA udomo oro juputara akwadebe a ị na isi banye n'eluigwe, nke ajụjụ na-anwale gị na nghọta na ike itinye a na-amụta n'ime ubi nke auditing na aza ajụjụ. A CPA-atụle ga-ọkachamara tax iwu ajụjụ ma ọ bụ na-enye tax ndụmọdụ ndị mmadụ. Ị ga-enwe ihe na-emeghe oke nke ọrụ ndị na-na a obere ma ọ bụ nnukwu ike ma ọ bụ ọbụna onwe gị.
A ukwu nke Business Administration bụ a afọ abụọ ogo N'ezie awa site azụmahịa kọleji akwadebe gị ubi nke azụmahịa. An MBA bụ a generalized ọmụmụ n'ime niile management ọrụ na kasị mma ruru eru n'ihi na gị ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị na-ebe a niche na ubi nke management, karịsịa ahịa. Mmụta na-emeghe na-achụ ogo N'ezie site akụkụ-oge na anya mmụta usoro dabere n'elu ha ebe nke pụrụ iche na ịta na pụtara na ndị ụlọ ọrụ. The different areas of specialization that you can achieve under the umbrella of an MBA program are accounting, ego, ahịa, ndị ọrụ nchịkwa mmadụ, na arụmọrụ (na mmekọrita na management analysis na atụmatụ). The usoro ọmụmụ nke MBA Ọ bụghị nanị ego na-agụnye-achị dị ka akụnụba, ahịa, nzukọ omume na quantitative analysis.
Dị ka a CPA, ọrụ gị na utu aha nwere ike ịgụnye: CFO, auditor, tax-enye Ndụmọdụ ma ọ bụ forensic ego. Ebe ọ bụ na ebe nke na-amụ ihe MBA ndị ọzọ mbara-sitere na, e nwere ndị ọzọ ọrụ nhọrọ. Ọ bụrụ na ị nwere a CPA ikike, nhọrọ gị ga-elekwasị anya na-aza ajụjụ na ego. Ọ bụrụ na ị na-ha abụọ, ị ga-enwe ụwa i nwere.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe MBA, i nwere a ukwuu nhọrọ na ọrụ ohere, depending on your area of specialization. Ọ bụrụ na ị nwere ihe MBA, ị pụrụ ịrụ ọrụ dị ka a management ndụmọdụ, marketing manager, ego onye oru banki, isi ọmụma ojii, arụmọrụ faili ma ọ bụ ego-enye Ndụmọdụ.
Ọ dịghị oké na nzuzo na-enwe ihe MBA ma ọ bụ CPA nwere ike imeghe ọzọ ọrụ ọnụ ụzọ na-amụba ịkpata nwere. Afọ ahụmahụ na ebe ị na-arụ ọrụ ga-enwe ụfọdụ mmetụta. Ọ bụrụ na ị na-a CPA ị ga-arụ ihe dị ka 10% karịa gị na-abụghị CPA ogbo. The etiti ụgwọ maka a CPA bụ $62,123 kwa afọ. N'akụkụ aka nke ọzọ, ebe na-arụ nnukwu ọrụ kwụọ ha ụgwọ n'ihi a MBA - pụtara na ụlọ akwụkwọ ị na-aga (dabeere na mba ogo) nwere ike mmetụta otú ihe ị na-eme. Otú ọ dị, maka afọ mbụ mgbe ịkpata gị MBA, ị pụrụ ịtụ anya na-enweta ọrụ na-enye na nkezi nke $50,427. Mgbe ahụ nwere ike iyi ihe underwhelming, na-n'uche na ị ga-ahụ gị ego nwere abawanye budata dị ka ị na-enwekwu ọrụ ahụmahụ. Ná nkezi, ma ọ bụrụ na i nwere ihe MBA, i nwere ike na-atụ anya ọzọ butụrụ ibu Akpọlite ​​na ọganihu karịa ọgbọ gị na-enweghị ihe a nzere.
O siri ike na-etinye a price mkpado na-aghọ a CPA. The nkuzi n'ụlọ akwụkwọ ebe ị ga-esi gị Undergraduate ogo ga-abụ akụkụ nke akụkụ. Na n'elu nke, ị ga-enwe na-akwụ ụgwọ jikọtara ọ bụla Prep ọmụmụ i nwere ike ime iji kwadebe maka CPA udomo oro. Ị nwere ike chepụta a ga-eri ihe $2,000. Banyere udomo oro onwe ya, na-akwụ ụgwọ na-arịda nnọọ site na steeti gaa na steeti. Ụfọdụ na-ekwu nwere a ndebanye ego na-agbajikwa ala site otú ọtụtụ ngalaba(s) nke udomo oro ị na-eme atụmatụ na-anọdụ maka. E nwere ndị ọzọ ụgwọ maka retakes. (Ị ga mkpa iji chọpụta na gị ala osisi nke accountancy.) on nkezi, ọ ga-eri banyere $1,500 itukwu niile nkebi anọ. N'ikpeazụ, e nwere ndị na-eri nke ikike ya onwe ya, nke averages banyere $150. Echefula na iji na-enwe gị ikike, ị ga-achọrọ ịga CPE ọmụmụ na a mgbe niile n'ihi na nke ị ga-ụgwọ ndị ọzọ. ụfọdụ na-ekwu, ka Connecticut, achọ 40 awa CPE n'afọ ọ bụla. Na ike na-eri ihe dị ka $4,000 na nọgidere na-akụziri onye ọ bụla n'afọ. Akwụ ụgwọ nke ịkpata ihe MBA bụ ukwuu agbanwe ma na-adabere ihe ndị dị ka: ebe, onwe vesos ọha alụmdi, ọgụgụ awa chọrọ, etc. Ọgụgụ na ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ dị ka akwụkwọ na / ma ọ bụ ohere online ihe, technology na-akwụ ụgwọ, amụ ọmụmụ na ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-ebi ndụ na-campus, na-eri nke ụlọ osisi. An nkezi na-eri nke nkuzi bụ na gburugburu $58,000. Ihe ndị ọzọ na-akpata ma na-arụ ọrụ ahụmahụ na ị ga-gārapu ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-a oge na-amụrụ. Ọ bụ ya mere akụkụ-oge, online na, accelerated MBA mmemme na-ewu nnọọ ewu.
Ịghọ a CPA na-ewe ogologo na-ukwuu ọzọ idem. Ị ga-dechara 150 Undergraduate n'aka awa na ụfọdụ na-ekwu chọrọ na ị ga-enwe a nyere ọnụ ọgụgụ nke awa-arụ ọrụ n'okpuru kpọmkwem nlekọta nke a CPA. Ị ga-enwe 18 ọnwa nọdụ maka ma na-agafe niile anọ n'akụkụ nke CPA udomo oro. Na ngụkọta ọ pụrụ iri banyere 8 1/2 afọ na-a CPA (e.g. afọ ise nke Undergraduate ọrụ, afọ abụọ na ọrụ na 18 ọnwa ruo CPA udomo oro.) E nweghị kpọmkwem timeframe maka emecha ihe MBA ogo omume. Ogologo oge ọ na-ewe ga-adabere na ọ bụrụ na ị na-amụ full ma ọ bụ akụkụ-oge na ọ bụrụ na ị na-aga ọmụmụ na campus ma ọ bụ ile ha online. Ụfọdụ ụlọ akwụkwọ na-enye otuto maka ọrụ ahụmahụ nke nwere ike ịkụ aka ụfọdụ nke awa chọrọ maka ogo ẹkụre. Ebe ọ bụ na ihe MBA mmemme a eteufọk ogo omume, ọ dịghị ụdị asambodo udomo oro na ị ga-achọrọ ruo n'elu ẹkụre. Ị nanị agụsị akwụkwọ na gị omume. on nkezi, ọ na-ewe 2-3 afọ mezue ihe MBA mmemme.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na-management ohere ma ọ bụ ofụri ofụri azụmahịa ize, mgbe ahụ, otu MBA ga-abụ mma. N'akụkụ aka nke ọzọ, ma ọ bụrụ na ị na-erube nnọọ a "nọmba cruncher,"Ị ga-aghọ nke a CPA, karịsịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-arụ ọrụ a nnukwu anọ ajụjụ ike. Ọ bụrụ na ị na-a CPA onye chọrọ ịghọtakwu nke azụmahịa arụmọrụ ma na-aru na ihe ọrụ, -enweta ihe MBA ga-bara uru. N'otu aka ahụ, ma ọ bụrụ na ị na-MBA na a ịta na ego na-eme atụmatụ iji ipuiche ụlọọrụ ego ma ọ bụ ụtụ isi, ọ na-eme n'ụzọ zuru okè, na-aga na na ibu a CPA. E nweghị ngwọta ndị MBA vesos CPA enwe ihe ijuanya banyere. E nwere ihe ike ịgwụcha agwụcha ahu nke nnyocha na-akọwa uru na ọghọm nke inwe otu ma ọ bụ ndị ọzọ ma ọ bụ ma. Network na okwu ndị na-enwe ihe MBA, CPA ma ọ bụ ma na-ahụ ihe na ndụmọdụ ha na-enye. Ị na-ekpebi ihe bụ ihe kasị mma n'ihi na ị na-ewere echiche gị ọdịmma, nkà, ego na ọrụ ebumnobi.
Best CPA Review Ọmụmụ nke 2018
njikere. Set. Crush It.
CPA Exam Nkebi
Best CPA Review Ọmụmụ nke 2018 464 comments
Belata Your CPA Exam Study Oge Site 116 awa! 232 comments
Nke Nkebi Of The CPA Exam M Kwesịrị Were First? 203 comments
CPA Exam Ngwa Usoro 127 comments
n'ozuzu Rating: ★★★★★
Email zitere ọma.
Tinye Email Address Na-m posted banyere uru ego
Message zitere ọma.
Tinye Phone Number
CPA, Roger CPA Review, nanị Discount, Deep Discount 38 eji taa
CPA 33 eji taa
Save $700 Off on this stellar review course with this Roger CPA Premier promo code. N'ihi ya na-ekere òkè na nkuzi, a N'ezie kemgbe a staple nke ụlọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ na ọ bụ ihe niile gị obere ekele anyị Roger CPA ego koodu. Ndị a ego, ọ dịghị ihe na-atụfu, ka eji Roger CPA coupon ma na-amụ taa.
GOSI dere koodu
ikpeazụ eji 17 nkeji gara aga
Ụbọchị mmebi: October 19, 2018
CPA, Surgent CPA Review, nanị Discount 39 eji taa
CPA 35 eji taa
ikpeazụ eji 23 nkeji gara aga
Ụbọchị mmebi: October 20, 2018
CPA, Wiley CPAexcel, nanị Discount 41 eji taa
CPA 36 eji taa
Save $367.50 na our Wiley CPA coupon on the Wiley Platinum CPAexcel course
ikpeazụ eji 6 nkeji gara aga
October Sale! Save $800 anyị Surgent CPA First Pass. Hurry offer ends soon!
CPA, Surgent CPA Review, nanị Discount 38 eji taa
CPA 40 eji taa
October Sale! Save $800 Gbanyụọ Surgent CPA Premier Pass. There’s no better time than right now to get on track to earn your CPA.
ikpeazụ eji 5 nkeji gara aga
Ụbọchị mmebi: October 31, 2018
Save $500 ma ọ bụ 20% na Wiley CPAexcel Platinum
CPA, Wiley CPAexcel, Special Nye 33 eji taa
Save $500 with our Wiley CPA coupon on the Wiley Platinum CPAexcel course. Zọpụta ego na a oké N'ezie taa ekele anyị Wiley koodu mgbasa ozi maka Platinum CPA Review N'ezie. *Nke a na-enye ike-jikọtara ndị ọzọ ego. See Wiley\_’s website for full details and exclusions.
ikpeazụ eji 32 nkeji gara aga
Ụbọchị mmebi: October 22, 2018
Roger CPA Review Elite Course Coupon – $700 Gbanyụọ!
CPA, Roger CPA Review, nanị Discount 38 eji taa
Were $700 anya, making Roger CPA’s Elite course the same price as their Premier course! Act fast this offer won’t come around again anytime soon. Lee Roger CPA si website maka nkọwa zuru ezu na ihe mgbochi.
Inwe dere koodu
ikpeazụ eji 16 nkeji gara aga
Ụbọchị mmebi: October 18, 2018
Zọpụta $500! Surgent CPA Review Premier Discount
CPA, Surgent CPA Review, Deep Discount 34 eji taa
CPA 41 eji taa
Iji Crush si nanị $500 Surgent CPA dere koodu na nke kacha mma ndibiat dị na Surgent CPA Review si Premier Course. Zọpụta ego na a Surgent ego koodu na ina malitere na-amụ ugbu a. Na-ekwu na gị Surgent dere koodu ugbu a na-amalite gị CPA njem taa!
Save $465 – Fast Forward Academy CPA Discount
n'ozuzu Rating: ★★★★ ★
CPA, nanị Discount, Fast Forward Academy 41 eji taa
CPA 38 eji taa
Save $465 off the Fast Forward Academy CPA Smart Bundle course this Fall! Use this discount link to save BIG and start your CPA journey today!
Inwe ego UGBU A
ikpeazụ eji 2 nkeji gara aga
Save $150 on the Crush Test Bank!
CPA, Special Nye, Crush The CPA 40 eji taa
CPA 34 eji taa
Save $150 off your 1st purchase of the Crush Test Bank!
ikpeazụ eji 44 nkeji gara aga
Zọpụta 20% – Roger CPA Review – Audio Course
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 37 eji taa
Were 20% Off Roger CPA Review Audio Course n'ihi na a obere oge na a nanị Crush The CPA dere koodu. Lee Roger CPA si website maka nkọwa zuru ezu na ihe mgbochi.
Zọpụta 20% – Roger CPA Review – Fresh Start Special
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 40 eji taa
Were 20% Off off a one-time purchase of Roger CPA Review Courses & Product. Lee Roger CPA si website maka nkọwa zuru ezu na ihe mgbochi.
Zọpụta 20% – Roger CPA Review – Cram Course
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 38 eji taa
Were 20% Off Roger CPA Review Cram Course n'ihi na a obere oge na a nanị Crush The CPA dere koodu. Lee Roger CPA si website maka nkọwa zuru ezu na ihe mgbochi.
ikpeazụ eji 9 nkeji gara aga
Zọpụta $145 On Yaeger CPA Review
CPA, Yaeger CPA Review, nanị Discount 33 eji taa
Save $145 off 4-part all-access full Yaeger CPA review courses. Save $40 off single-part all-access CPA courses. Yaeger CPA is a high-quality, trusted source for CPA review material. Take advantage of these savings because they don’t last long.
Gryfin CPA Cram Course Discount
CPA, Gryfina, nanị Discount 35 eji taa
CPA 39 eji taa
nweta 15% anya the Gryfin CPA Cram Course with our great discount code. Ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ mmezi ọmụmụ ihe maka onye ọ bụla CPA udomo oro ngalaba, ime ka ulo oru mbo ke Gryfin CPA Cram Course iji jide n'aka na ị na-agafe!
ikpeazụ eji 4 nkeji gara aga
Gleim CPA Premium Review Course Discount – Save $200 ma ọ bụ 10%
CPA, Gleim CPA Review, nanị Discount 40 eji taa
Save $200 with our Gleim CPA Premium Course discount and get an awesome deal on a proven course. You’ll have more money for exam fees and anything you need to help you get through the studying process when you use our Gleim discount link. Ịzụta ugbu a ma na-malitere taa!
ikpeazụ eji 22 nkeji gara aga
Wiley Gold CPAexcel Discount Code
CPA, Wiley CPAexcel, nanị Discount 39 eji taa
Save $277.50 with our Wiley CPA coupon on the Wiley Gold CPAexcel course. Zọpụta ego na a oké N'ezie taa ekele anyị Wiley koodu mgbasa ozi maka Gold CPA Review N'ezie.
Wee na CPA Exam Ajụjụ? nweta Azịza!
CPA, Surgent CPA Review, Webinar 33 eji taa
Jikọọ Surgent si ndụ webinar usoro ịmụta ihe niile banyere CPA udomo oro:
2018 CPA Exam Mgbanwe
Olee otú dozie a Research Ịme anwansị Ajụjụ
Nweta ọtụtụ Points On Your BEC Ede Communication Ajụjụ
Ụbọchị mmebi: October 29, 2018
Roger CPA Financing Nye
CPA, Roger CPA Review, Financing Nye 35 eji taa
n'ihi na dị nnọọ $183 a ọnwa, ị nwere ike nweta Roger CPA review N'ezie na ihe oké ọnụ ego plan. Don’t hesitate—start studying for the CPA exam now thanks to this great Roger CPA financing deal.
ikpeazụ eji 20 nkeji gara aga
ụgha CPA 0% Financing
CPA, Surgent CPA Review, Financing Nye 36 eji taa
N'ihi nke a ụgha 0% ego deal, ị nwere ike nweta enyemaka ụfọdụ na a oké CPA review N'ezie . maka dị nnọọ $49, i nwere ike na-amalite na-amụ taa. ekele a Surgent ego na-enye. Ekwela uloanumaanu-gị CPA njem na-echere!
ikpeazụ eji 46 sekọnd ago
Surgent CPA 5-Day FREE Trial Nye
CPA, Surgent CPA Review, Free Trial 34 eji taa
Lee ihe niile mama bụ banyere onwe gị. Test ụgbọala Surgent CPA Review N'ezie nke mbụ 5 ụbọchị kpamkpam free. Gịnị ka ị na-eche? Malitere taa!
Malite gị FREE ikpe
Ụbọchị mmebi: October 26, 2018
Roger Weekly Ego
CPA, Roger CPA Review, ọzọ 40 eji taa
nweta ruo $800 & 30% anya na ndị a ukwuu Roger CPA coupon codes na-amalite na-amụ obere taa! Ị nwere ike iru eru maka Roger CPA Official Akon Codes, dị ka Fresh Malite, Firm, Student, and Newsletter discounts.
GOSI Weekly mgbasa ozi
ikpeazụ eji 15 nkeji gara aga
Wiley CPAexcel Weekly Ego
CPA, Wiley CPAexcel, ọzọ 36 eji taa
nweta ruo $500 anya na a N'ezie ekele Wiley CPA coupon codes nyere nanị na Crush. Wiley CPAexcel si Flashsale nke Week bụ a ohere maka ị ka malitere ịmụ ihe taa. Lelee Wiley saịtị ahụ ma ọ bụrụ na ha na-agba ọ bụla pụrụ iche ego!
Wiley Silver CPAexcel Discount Code
CPA, Wiley CPAexcel, nanị Discount 40 eji taa
Save $255.00 with our Wiley CPA coupon on the Wiley Silver CPAexcel course. Zọpụta ego na a oké N'ezie taa ekele anyị Wiley koodu mgbasa ozi maka Silver CPA Review N'ezie.
ikpeazụ eji 59 sekọnd ago
nweta The 4 Resources m na- Gafere CPA Exam on My
(ndumodu: 2 nke ha na-FREE)
Your email bụ nchebe na m. M asị spam kwa!
Big 4 Accounting Firms Ụgwọ ọnwa atụrụ ala Ala
CPA Exam Ngwa Usoro
Best 2018 CPA Review Ego & Akon Codes
Atumatu na ngosi
Anyị ọkwá anyị Ọmụmụ